Goormaan codsan karaa caawimaadda? - Maahanmuuttovirasto
Haddii aad tahay magan-galyo doon, walina aadan helin wax go’aan ah oo codsigaaga la xiriira ama aad tahay qof dhibane ah oo soo marey ka ganacsiga dadka, waqti kasta ayaad codsan kartaa caawimaadda loogu talagalay qofka iskiis u laabanaaya.
Haddii aad heysato ciqaamad ku meelgaar ah si aan waddanka lagaaga saarin, waad codsan kartaa caawimaadda loogu talagaley qofka iskiis u laabanaaya xilli kasta, laakiin ugu danbeyn waqtiga dhicitaanka ciqaamaddaada.
Haddii aad heysato ciqaamad ku saleysan heerka labaad ee ban’aadminimada, waad codsan kartaa caawimaadda loogu talagaley qofka iskiis u laabanaaya xilli kasta, laakiin ugu danbeyn waqtiga dhicitaanka ciqaamaddaada.
Haddii lagu siiyey go’aan diidmo ah oo ku saabsan codsigaagii magan-galyo doonka ah, waxaa sida guud adiga laguu qabanaayaa muddo aad si iskaa ah dib ugu laaban karto dalkaagii, taasoo ah ugu badnaan 30 maalmood. Mudada aad sida iskaa ah dib ugu laaban karto waxaa laguugu soo qorayaa go’aanka lagu siiyay.
Haddii aad dooneyso in aad si iskaa ah dib ugu laabato laguna caawiyo, waa inaad codsato caawimaadda la siiyo qofka iskiis u laabanaaya, isla mudadaas laguu qabtay in aad dib ugu laabato dalkaagii.
Haddii aadan codsaneynin barnaamijka iskaa dib u laabashada, booliska ayaa ku geynaaya dalkaagii ama kugu dabagalaaya in aad ka baxdey Finland. Haddii ay xaaladdu saas u dhacdo laguma siinaayo wax lacag ah ama caawimaad kale oo dib u laabasho ah.
Haddii aad heshay go’aan diidmo ah, laakiin sabab jirta awgeed aaney boolisku ku geyn karin dalkaagii, shaqaaalaha xeradaada qaxootiga ayaa arinkaas kuu soo sheegi doona. Waxaana kugu waajib ah markaas inaad codsato caawimaadda la siiyo qofka si iskiis ah u laabanaaya muddo 30 maalmood gudahood ah, taasoo ka bilaabaneysa maalinka ay shaqaalaha xerada qaxootigu kuu sheegeen arinkaas. Haddii aad codsan weydo caawimaaddaas, adeegii aad ka heleysay xerada qaxootiga waa uu kaa joogsanayaa.
Adeegga xerada qaxootiga ee kaa joogsanaaya waxaa loola jeedaa, in aadan mar danbe wax xaq ah u laheyn inaad ku noolaato xerada qaxootiga, ama aad hesho lacagtii biilka xerada, tusaale ahaana aadan isticmaali karin adeegyada caafimaadka.
Waxaa kugu waajib ah in si iskaa ah aad uga baxdo xerada qaxootiga iyo Finland oo dhanba, aadna ku laabato dalkaagii hooyo ama dalkii kale ee aad si sharci ah ku joogi karto.
Arinka ah adeegyada xerada qaxootiga ee joogsanaaya ma khuseeyo caruurtaaan wali gaarin da’dii qaangaarka ee magan-galyo doonka ah, kuwaasoo Finand jooga iyadoon waalidkood la socon.